Iyo yechitatu beta yeTVOS 11.4 uye watchOS 4.3.1 ikozvino inowanika kune vanogadzira | Ndinobva mac
Pamwe pamwe nekuvhurwa kwechitatu beta yevagadziri veMacOS 10.13.5, vakomana vanobva kuCupertino vakashandisawo masikati kusvika ltangisa mabetas evanogadzira mamwe masisitimu anoshanda kuti Apple ine musika: iOS, tvOS uye watchOS. Ipo iOS neTVOS zvaburitsa beta yechitatu ye11.4, iyo beta yeWatchOS, iyo Apple Watch inoshanda sisitimu, inhamba 4.3.1.
MuTVOS 11.4, isu hatina kuwana chero chinhu chitsva chekuburitsa pachena, sezvazvinoitika ne macOS 10.13.4, nekuti mune zvinyorwa zvekuvandudza, Apple inongotaura izvo tsikidzi dzakagadziriswa izvo zvakawanikwa kubva pakatangwa iyo yapfuura vhezheni tvOS 11.3, gadziriso iyo isina kutiunzira nhau zhinji maererano nezvimiro zvekuratidzira.
Kana iwe uri mugadziri uye iwe waisa iwo apfuura betas, iwe unongofanirwa kumirira kuti ugamuchire inoenderana chiziviso kana kumanikidza icho kuburikidza neZvirevo zvechigadzirwa chako. Kana zvisiri, uchafanirwa kubatanidza iyo Apple TV kune komputa yako uye kuburikidza neXcode uye inoenderana chitupa, kurodha pasi uye nekuisa inoenderana beta. Sezvo neiyo iripo macOS beta, iyi yekupedzisira vhezheni ingangosvika gare gare mwedzi uno, mazuva mashoma pamberi peWWDC.
Asi zvakare, vakomana vanobva Cupertino futi vaburitsa beta yechitatu, zvakare yevanogadzira, yewatchOS 4.3.1, vhezheni iyo, senge ese masisitimu anoshanda akaburitswa neApple nezuro, inongotipa mishoma yekuvandudza mashandiro uye mhinduro dzemabhureki madiki akawanikwa kubva pakatangwa vhezheni yapfuura yehurongwa hwekushandisa yeApple Watch. Kuvhurwa kwayo, senge iOS 11.3, tvOS 11.3, macOS 10.13.5 yakarongerwa kupera kwemwedzi uno, mazuva mashoma pamberi peWWDC, uko Apple ichatiratidza nhau dzinosvika mune dzinotevera shanduro dzayo mashandiro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Iyo yechitatu beta yeTVOS 11.4 uye watchOS 4.3.1 ikozvino inowanika kune vanogadzira
Apple inoburitsa mhedzisiro yezvemari yekota yechipiri yegore rayo remari
Iyo yechitatu beta ye macOS 10.13.5 yevagadziri yave kuwanikwa